विनय तामाङको मैनबत्ती जुलूसः कति सफल बन्छ दोस्रो मास्टर स्ट्रोक? – खबरम्यागजिन
Homeखबरविनय तामाङको मैनबत्ती जुलूसः कति सफल बन्छ दोस्रो मास्टर स्ट्रोक?
विनय तामाङको मैनबत्ती जुलूसः कति सफल बन्छ दोस्रो मास्टर स्ट्रोक?
September 5, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
दार्जीलिङः पहाड़ खोल्ने प्रथम मास्टर स्ट्रोक विफल भए पनि गोजमुमोका बागी नेता विनय तामाङले मैनबत्ती जुलूसलाई दोस्रो मास्टर स्ट्रोक अनि जनसभालाई तेस्रो मास्टर स्ट्रोक बनाउने निश्‍चिय गरेका छन् अनि यसलाई सफल बनाएरै छोड़्ने संकल्प पनि गरेका छन्।
उनले भोलि साँझ5बजी दार्जीलिङको चौरास्ताबाट शान्ति जुलूस निकाल्ने निर्णय लिएका छन् भने यस जुलूसमा कुनै पनि पार्टीको झण्डा नहुने पनि बताए। उनले यस जुलूसमा दार्जीलिङका सम्पूर्ण व्यवसायी, शिक्षानुरागी, संघ-संस्था, राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सहभागी बन्ने पनि अपील गरेका छन्। उनले आज आफ्नो आवासमानै पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भने-दार्जीलिङ पहाड़को पुरानौ गौरव फर्काउन सम्पूर्ण जनता अघि आउनुपर्छ। यसैले भोलि साँझ5बजी चौरास्ताबाट एक शान्ति जुलूस निकालिनेछ, जसमा सहभागी बन्नेहरुले मैनबत्ती बोक्नेछन्। यो जुलूस चौरास्ताबाट आएर चौकबजारमा टुङ्गिनेछ। यसरीनै उनले आगामी 8 र 12 सितम्बरभित्र दार्जीलिङमा एक जनसभा पनि गर्ने योजना बनाएको बताए।
उनले गोजमुमोका शीर्ष नेतृत्वहरुमाथि आरोप लगाउँदै भने-दार्जीलिङ पुलिसले हिजो दबाईपानी क्षेत्रबाट जुन विष्फोटक सामग्रीहरु जफ्त गर्यो, यसप्रकारको कार्य पहाड़मा हुनुहुँदैन भनेर हामीले धेरैअघिनै भनेका थियौं। यसैकारण म अनि अनित थापा गोजमुमोका शीर्ष नेतृत्वहरुबाट अलग भएका हौं। यसैले यसप्रकारको बाटोमा जानेहरुलाई सही बाटो अप्नाउने अपील गर्छु, किनभने हिंसात्मक कार्यले कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको लक्ष्य पूर्ण हुन सक्तैन। कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट हुन्छ अनि वार्तामानै विश्‍वास गर्नुपर्छ। सन् 1986-को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि यस्तै हिंसात्मक भएको कारणनै विफल भएको हो, हिंसाको कारणनै त्यस समय गोर्खाल्यान्ड नभएको हो।
यसैले हिसात्मक आन्दोलनको परिणाम शुन्य हुने भएकोलेनै जसले पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न चाहँदैछन्, उनीहरुले सही बाटो अप्नाउनुपर्छ। यसैबीच, अब विनय तामाङको भोलि हुने मैनबत्ती जुलूस कति सफल बन्छ अनि यस जुलूसलाई दार्जीलिङका जनताले कति हदसम्म समर्थन जनाउनेछन् साथै 12 सितम्बरभित्र हुने जनसभालेनै विनय तामाङको राजनैतिक भविष्य निर्धारित हुने स्पष्ट छ।
पूर्व आदिवासी सभासदले जेलभित्रै थालिन् भोक हड़ताल
7 सितम्बर जीएमसीसीको जनसभाः देखापऱ्यो पोष्टर